Courses - Myanmar BOC
Business Knowledge of Kay Thi
09-979 959 994
MBDC Management And Business Development Center မှFounder Daw Kay Thi ရဲ့ Business Knowledge များ ကိုစုစည်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Adobe Illustrator 2021 Lessons By Khine Khine
MITDC ကွန်ပျူတာသင်ခန်းမှ ဆရာမ ခိုင်ခိုင် သင်ကြားထားသော Adobe Illustrator သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Start Now နှိပ်ပီး စတင်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Myanmar AutoCAD Users Center-MAUC
AutoCAD 3D Basic (MAUC)
AutoCAD 3Dသင်ခန်းစာကို လေ့လာချင်သူများအတွက်အချိန်တိုတိုနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ။ ယခု သင်ခန်းစာကို AutoCAD 3D Basic (MAUC) မှသင်ကြားထားပေးပါတယ်။ အခုပဲ Start Nowနှိပ်ပီး စတင်လေ့လာလိုက်ပါခင်ဗျာ။
Power Point သင်ခန်းစာ
Power Pointသင်ခန်းစာကို လေ့လာချင်သူများအတွက် အချိန်တိုတိုနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ အခုပဲ Start Nowနှိပ်ပီး စတင်လေ့လာလိုက်ပါခင်ဗျာ
Hnin Hnin Yu
Japanese N5,N4 Grammar
HNIN HNIN YU Channelမှ သင်ကြားထားသော ဂျပန်ဘာသာစကား N5,N4 Grammerသင်ခန်းစာများကို Myanmar BOCတွင် စုစည်းထားပါတယ်။ Enrollနှိပ်ပြီးစတင်လေ့လာနိုင်ပြီ။
Sketch Up နဲ့ V-Rayကို အသုံးပြုပြီး လှပသော Designများကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ
Myanmar Data Science
Google Data Studio သင်ခန်းစာလေ့လာရန်ကြာချိန် စုစုပေါင်း ( 1:30 ) Hours. Google Data Studio သင်ခန်းစာကို MYANMAR DATA SCIENCE မှသင်ကြားပေးထားပါတယ်…။ သင်ကြားရတာအဆင်ပြေပါက ကြယ်ပွင့်လေးများဖြင့် Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
Adobe Premiere Pro CS6 အခြေခံသင်ခန်းစာများ
August 12, 2019 / 1 Comment
Adobe Premiere Pro CS6 အခြေခံသင်ခန်းစာများ ကိုလေ့လာမယ်။
Teacher ဘားမစ္ နည္းပညာ
June 26, 2019 /3Comments
Smartphone Photography အကြောင်း လေ့လာကြမယ် Myanmar Best Online Courses | MyanmarBOC Smartphone photography Smartphone photography with smartphone will give you to take photograph with your smartphone and this lessons will give youabest smartphone photograph with your smartphone.Smartphone is easy to take pictures. Smartphone will give youabest setting likeapro. Related…
January 18, 2019 / 11 Comments
Photoshop ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် free online course ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားနိုင်အောင် online learning marketplace တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
+ 09 979 959 994
အခမဲ့ app ဒေါင်းရန်
2020 © Myanmar Web Store မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။